China, Yakasarudzika, Hunhu Ballerina tutu, Ballerina koshitomu, Ballet tutu, Adult ballet tutu, Pancake tutu koshitomu, Mutengo, Vatengesi, Fekitori - Fitdance ballet fekitori. - 4
vakaoma ballet tutu
Iyo dhizaini yekufemerwa kwaStiff Ballet Tutu kunobva â € œWetlandsâ € .Iine: Pfuma rhinestones! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.
yakachipa pancake tutu
Dhizaini yeiyo Yakachipa Pancake Tutus Yekutengesa yakafanana ne "Jacaranda" .Iine: buckle nemuviri wemuvara zvinosanganisa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi; Gradient kara dhizaini! Mamwe akapfava uye akazara mavara, akanaka kwazvo!)